Tababaraha kooxda Arsenal Arsene Wenger oo waano u diray macalinka Tottenham. | Entertainment and News Site
Home » News » Tababaraha kooxda Arsenal Arsene Wenger oo waano u diray macalinka Tottenham.
Tababaraha kooxda Arsenal Arsene Wenger oo waano u diray macalinka Tottenham.
daajis.com:- Arsene Wenger ayaa aaminsan in horumarka Tottenham uu noqon doona mid dib u dhaca labo sano ka dib markii kooxda ay xafiiltamaan ee ka dhisan waqooyiga London, Arsenal ay ku balan satay garoonkeeda White Hart Lane kasoo 118 sano jirsaday.
Kulan shalay kadib, Tottenham ayaa goaan satay garoonkeeda cudub in la hormaiyo, sido kale waxay madaxdeeda goaan sadeen inay halsano kale kusii ciyaaran garoonka Wembley, ka hor inta aysan ku qarash gareyn garoonkeeda, Tottenham garoonkeeda waxay ku qarash garyn doontaa lacag dhan 800 million oo lacagta pound ka loo yaqan.
Sikastay ahaataba, iguba markii ay kabadalayeen Highbury oo ay u badalayeen Emirates sanadii 2006dii, Maamulaha Arsenal ee Arsene Wenger wuxuu sameeyay waano ku saabsan kulanka derby ahaa bariyoo kale. Wuxuuna yiri.”waa mid aad u adag, inka badan inta aad malayneyso,” Arsene Wenger ayaa yri.
“ugu horeyn, waxaad wajahaysaa xayiraad dhaqaale. Laakiin marka xigo, madareemaysid inaad joogtid gurigaada. Waxaad u baahan tahay inaad sameysid tariikh si aad u dareentid raaxo sido inaad gurigaada ku ciyaareysid. Waxaan ku dhihi lahaa taasi waxay qaadan doontaa labo sano.”
Posted by Bulsha Arrimaha Bulshada, Published at 19:55 and have